အဆီပိုများကို သဘာဝအတိုင်း ကျဆင်းစေနိုင်တဲ့ ဂျင်းပြုတ်ရည် – Shwe Innlay
HomeHealthအဆီပိုများကို သဘာဝအတိုင်း ကျဆင်းစေနိုင်တဲ့ ဂျင်းပြုတ်ရည်
အဆီပိုများကို သဘာဝအတိုင်း ကျဆင်းစေနိုင်တဲ့ ဂျင်းပြုတ်ရည်
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပိုလျှံနေတဲ့ အဆီတွေကို သဘာဝအတိုင်း ကျချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နည်းလမ်းမှန်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
ဝိတ်ချတယ်ဆိုပြီး အစားအသောက်တွေရှောင်၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အပြင်းအထန်လုပ်တိုင်း နည်းလမ်းမှန်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ သင့်တင့်မျှတတဲ့ အစားအသောက်၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါတင်မက တစ်ဖက်တလမ်းကနေ ကျန်းမာရေးကောင်းကာ ကိုယ်တွင်း အဆီပို၊ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှင်းပေးမယ့် ဂျင်းပြုတ်ရည်လို သဘာဝဓါတ်စာလေးတွေကိုလည်း မှီဝဲပေးသင့်ပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေအရ ဂျင်းပြုတ်ရည်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်ကို ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်တွင်းအဆီပိုများကို ကျစေတဲ့အပြင် glucose level နှင့် အင်ဆူလင်ကိုပါ လျော့ကျစေပါတယ်။ Medical News Today ရဲ့ လေ့လာချက်အရ ဂျင်းပြုတ်ရည်မှာပါဝင်တဲ့ phenolic compound ဟာ လေကောင်းစေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အင်ဇိုင်းများနှင့် ပန်ကရိယတို့အပေါ်တွင်ပါ ကောင်းမွန်တဲ့ သက်ရောက်မှုများကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ အစာခြေစနစ်ကို သန့်ရှင်းကောင်းမွန်စေတာကြောင့် ဝိတ်ကျဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။
ဂျင်းပြုတ်ရည်ရဲ့ ကောင်းကျိုးဟာ ဝိတ်ကျရုံတင် မကပါဘူး။ ကြွက်သားရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်းကို သက်သာစေလို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူများ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ အအေးမိဖျားနာဖြစ်ချိန်မှာလည်း ဂျင်းပြုတ်ရည်က သင့်ကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေမှာပါ။ အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာလာချိန် ကိုက်ခဲနာကြင်မှုများ သက်သာစေဖို့ အတွက်လည်း သောက်သုံးကြပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ဂျင်းပြုတ်ရည်ပြုတ်တဲ့အခါ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလို အရသာကောင်းမွန်စေဖို့ ပျားရည်၊ သံပုရာရည် စသဖြင့် ထည့်သွင်းသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသကဲ့သို့ ဂျင်းများများစားသုံးခြင်းကလည်း မလိုလားအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေလို့ တစ်နေ့ကို 4g ထက်ပိုပြီး မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။
ရုံးပတီသီးစားပြီးလျှင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်သွားလဲ ? ? ?
လူသိနည်းကြတဲ့ စပါးလင် အကျိုးကျေးဇူး ၇ ခု